Ismaa'eel Haniiyaa: Hoogganaan Hamaas Ameerikaadhaan Shorokeessaa jedhaman - BBC News Afaan Oromoo
Ismaa'eel Haniiyaa: Hoogganaan Hamaas Ameerikaadhaan Shorokeessaa jedhaman
1 Guraandhala 2018
Goodayyaa suuraa Gaazaa kan jiraatu Ismaa'eel Haniyaan hoogganaa waajira siyaasaa Hamaas kan ta'e bara darbe dha.
Ameerikaan Hoogganaa Siyaasa Sochii Islaamummaa Hamaas shororkeessaa jechuun qoqqobbii irra keessee jirti.
Muummeen haajaa alaa Ameerikaa Ismaa'eel Haniyaan 'qaama waraanaa Hamaas, fincila hidhannoo geggeessuufi lammiilee nagaa ajjeesu, waliin hariiroo cimaa qaba' jedhera.
Hulaa Gaazaatti irree cimaa kan qabu Hamaas, Ameerikaa, Israa'eelii, tokkummaa Awroopaa fi Ingiliziin garee shororkeessaa erga jedhame bubbuleera.
Maqaan obbo Haniyaa toora Shororkeessitoota jedhaman keessatti tarrreefamuu isaa, 'waanuma hin taane' Hamaas jechuun balaaleffateera.
Yaadni barreeeffaman garichi gadhiise, murteen kun 'ejjennoo saffisaan qubannoo Israa'eelotaa mormuu fi bakka qubatan irraa gadhiisisuuf qabanne booddeetti hin harkisu' jedha.
Erga bara 2008 Hamaas waraana sadii Israa'eel waliin geeggeeseen, lammiilee Ameerikaa 17 ajjeefamaniif biyyattiin garee kana itti gaafatamaa gooteetti.
Muummeen haajaa alaa garee hidhattootaa sadiis tooraa shororkeessitootaa jelatti tarreessiteetti:
Harakaat al- Sabireen, garee deeggarsa Iraaniin naannoo Hulaa Gaazaa fi Weesti Baankitti sochoo'aa jiru fi Hashiim Saaleemiin hoogganamu.
Liiwaa al-taawra, garee naannolee Masrii Qaaluubiyaa fi Menoofiyaa jedhaman keessatti socho'uufi bara 2016 ajjeefamuu koomaandara humna waraanaa Masriif, akkasumas bara 2017 haleellaa boombii gidduugala shaakala poolisii Taantaaf sababa ta'e.
HASM, garee kan biraa Masrii yoo ta'u, ajjeefamuu qondaala Eejensii Nageenya Biyyooleessaa Masrii fi haleellaa Embaasii Miyaanmaar Kaayirootti argamuu iirratti raawwatame keessaa harka qaba jedhameedha.
''Kunnen shororkeessitoota jedhamuun farajaman kun gareelee fi hooggantoota hedduu murteessoo ta'aniidha. Itti dabalees gareelee Iraaniin deeggaraman lamas jiru. Kunneen warra tasgabbii Gidduuu Gala Bahaa jeeqaa jiraniidha.
Marii nageenyaa deemaa jirus rakkoo keessa galchuun michuuwwan keenya akka Masrii fi Israa'eel goolaa jiru,'' jedhan Ministirri haajaa alaa Ameerikaa Reeksi Tiilarsan.
Itti dabaluuniis, ''murteen har'a fudhatame qaamoleen kun wantoota Kororaa itti baafachuu fi gocha shorokeessummaaa isaanii ittiin raawwachuuf barbaadan akka hinarganne waan taasisuuf ejjennoo barbaachisaa dha' jedhan.